Mmemme 6 iji mepụta bootable flash drive maka Windows, Linux na macOS 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Mmemme maka ịmepụta bootable flash drive na-achọ ịkwado mgbanwe nke eriri flash USB n'ime diski bootable. Ngwaọrụ ndị a na-edochi CD na DVD, ma ọ bụ iji weghachite sistemụ dara ma ọ bụ ịwụnye site na ncha.
Ndepụta na-esonụ na-eweta ngwanrọ kachasị mma maka nkesa Windows, macOS, na Linux. Lelee!
Dị na Portuguese, Rufus bụ faịlụ a na-ewepụ ewepụ nke na-achọghịdị awụnye na PC gị iji ya. The ngwa-enye gị ohere ime ka a bootable flash mbanye ike echichi media site na ihe ISO faịlụ.
Enwekwara ike ime uzo nke imelite BIOS, ngwa ngwa ma obu mmemme na asusu di ala. The ngwa nwekwara nhọrọ ịlele flash mbanye maka ihe ọjọọ ndi. Mmepe na-ekwe nkwa na software bụ ugboro abụọ ngwa ngwa karịa ndị isi asọmpi.
Rufus (n'efu): Windows | Linux
Playback / Pen mbanye Linux
Universal USB Installer pụtara n'ihi ịdị mfe nke ojiji. Naanị họrọ sistemụ arụmọrụ, faịlụ ISO, na mkpisi USB. Mgbe ahụ gaa Mepụta were gabazie. Enwere ike iji mmemme ahụ ọ bụghị naanị maka ntinye sistemụ, kamakwa dị ka ụgbọala mgbake, nchekwa.
Akụrụngwa ahụ na-enye gị ohere ịmepụta ngwaọrụ buut na nchekwa na-adịgide adịgide na nkesa Linux ụfọdụ. Njirimara ahụ na-enye gị ohere ịnweta ntọala usoro na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ.
Ọ bụrụ na ị ga-eji ya maka obere obere Windows, a ghaghị ịhazi pendrive ka NTFS ma nwee oghere 20 GB n'efu. N’ọnọdụ ndị ọzọ, enwere ike ịhazi ngwaọrụ ahụ dịka Fat16 ma ọ bụ Fat32.
Ngwunye USB zuru ụwa ọnụ (n'efu): Windows | Linux
Site na otu onye nrụpụta ka Universal USB Installer, YUMI pụtara ihe dị ka nrụnye multiboot. Kedu ihe nke ahụ pụtara? Nke ahụ na - enyere gị aka ịwụnye ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, ngwa ngwa, ụlọ ahịa antivirus nkeji na ese foto, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'otu pendrive.
Nanị nsogbu bụ ike ngwaọrụ ịnabata ihe ndị a niile. Ngwa ahụ na-enyekwa ohere ịmepụta pendrive na nchekwa na-adịgide adịgide. Iji jiri ya, a ghaghị ịhazi ya na Fat16, Fat32, ma ọ bụ NTFS.
YUMI (n'efu): Windows | Linux | Mac os
4. Windows USB / DVD Ngwá Ọrụ
Windows USB / DVD Tool bụ ngwa ọrụ Microsoft maka ịmepụta bootable flash iji wụnye Windows 7 ma ọ bụ 8. Ihe omume a na-enye gị ohere ịme akwụkwọ nke faịlụ ISO, nke na-eweta ihe niile ntinye Windows jikọtara.
Mfe iji, dị nnọọ itinye media mbanye n'ime USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, họrọ ISO na pịa Gaa na. Wee soro ntuziaka. Ọ bụrụ n ’ịchọghị ọrụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụ nhọrọ nhazi ị nwere na draịva gị, nke a nwere ike ịbụ ngwa maka gị.
Windows USB / DVD Ngwá Ọrụ (n'efu): Windows 7 na 8
Etcher na-apụ apụ maka ịdị mfe nke ojiji, ọ bụ ezie na ọ nwere ndakọrịta na sistemụ dị iche iche. Site na ịpị aka ole na ole, ọ ga - ahapụ gị ka ị gbanye flash drive ka ọ bụrụ mgbasa ozi nwere ike ịkwaga, ma ọ bụ maka nkesa Windows, macOS ma ọ bụ Linux Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị nwere obere ahụmịhe n'ọhịa.
Etcher (n'efu, ma nwekwara ụdị akwụrụ ụgwọ): Windows | macOS | Linux
6. Ugochi WinSetupFromUSB
WinSetupFromUSB na-enye gị ohere ịmepụta multiboot flash draịva na ụdị Windows ọ bụla, site na XP na Windows 10. Ọ bụ ezie na aha ahụ na-elekwasị anya na sistemụ Microsoft, mmemme ahụ dakọtara na ụfọdụ ụdị Linux.
Na mgbakwunye, ọ na-enye nhọrọ nke ịkwado draịva ngwanrọ, dịka antivirus, na diski mgbake sitere na ndị nrụpụta dị iche iche. Ọbụlagodi na ọtụtụ ọrụ, ọ na-apụ apụ maka inwe interface na ịdị mfe iji.
WinSetupFromUSB (n'efu): Windows | Linux
Gịnị bụ bootable flash mbanye maka?
Na mbụ, ọ na-adịkarị iji CD, DVD-ROM, na ọbụna diski diski dị ka mgbasa ozi bootable. Dika otutu komputa nke oge a adighi akwado ndi mgbasa ozi a, USB flash drive na kaadi SD enwewo ohere na ndi ozo.
E wezụga ịbụ ndị ọzọ obere, pendrive bụ dịkwa ngwa ngwa. Site n'ime ka bootable, ịnwere ike iji ya dị ka mpụga os installer. Ihe omume nwụnye na diski buut nwere njikwa PC zuru oke ma nwee ike overwrite usoro dị ugbu a ma ọ bụ wụnye ihe ọhụrụ site na ncha.
Enwere ike iji ngwaọrụ dị ka diski mgbake, nwere ike idozi usoro ọdịda. N'okwu a, a na-eji ụdị sistemụ ọkụ dị mfe, mana yana draịva zuru ezu na akụrụngwa iji dozie nsogbu ahụ ma ọ bụ opekata mpe ike ịkwado data dị mkpa.
Mmemme kachasị mma iji gbaa CD, DVD na Blu-Ray ọkụ
Etu ibudata ma wụnye Google Chrome na-anọghị n'ịntanetị
Ihe kachasị mma na antivirus n'efu maka PC